Times Of Nepali » Indian idol मा नेपाली ठिटो कालापानी हाम्रो हो भन्दै गर्जियो , सक्दो ग्रुप हरुमा शेयर गरौ।।
Indian idol मा नेपाली ठिटो कालापानी हाम्रो हो भन्दै गर्जियो , सक्दो ग्रुप हरुमा शेयर गरौ।।
भिडियो अन्तिममा छ। पुरा हेर्नुहोला।।
Indian idol मा नेपाली ठिटो कालापानी हाम्रो हो भन्दै गर्जियो , सक्दो ग्रुप हरुमा शेयर गरौ । हौसला स्वरुप पेज लाईक् गर्न पनि नछुटाउनु होला।
सीमानामा काँ’डेतार लगाउन यी दम्पतीले ५० लाख सहयोग र दूई बर्ष श्र’मदान गर्ने ! सक्दो शेयर गर्नुहोस
यो रकम काम पुरा हूँदासम्म लगानी हुनेछ । म आफै पनि प्र’त्यक्ष भौ’तिक सहयोग २–४ साल ख’टेर गर्नेछु । मात्र नेपाल सरकार र जनताको स’हयोग चाहियो । हाम्रो आमालाई ब’चाऊन सबै ए’कजुट हौ । कसैले अन्यथा नलिनुहोला ।मलाई देश र जनताको अति माया लाग्छ । मेरो कुनै स्वा’र्थ छैन । मेरो भि’त्री मनले भनेको हुँ । मलाई कुनै लो’भलालच छैन । मलाई कुनै केही चाहिएको छैन । मैले जे गरेको छु , गर्दैछु देश जनताको लागि मात्र हो । मेरो परीवार र मेरो आफ़न्तको लागि गरेको होईन । यो एकदम कि’ल्यर हुनुहोला । मनमा जे छ बाहिर पनि त्यही बोल्छु । म कुनै कुरा लु’कार च’पार गर्दिन !
भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला।।